सुनको जंगल सुनको जंगल
01तपाईं स्लट स्वर्ण जंगल को नाम ले उत्सुक छैनन्? तपाईं हुन हर कारण छ. यो क्यासिनो मुक्त कुनै जम्मा आवश्यक स्लट खेल तपाईंलाई के तपाईंले कहिल्यै विचार गर्न सक्ने सुन सम्पत्तिहरू सबै असंख्य प्रकारका ल्याउँछ spins.
को रील Adorning सुनको ढोकाहरू छन्, नियमहरू, सुनको thrones, कलाकृतिहरु, बहुमूल्य पत्थर र केहि र सुनको सबै संग सम्मिलित golds छल्ले. यो क्यासिनो मुक्त कुनै जम्मा आवश्यक स्लट एक भारतीय ऐतिहासिक विषय बनेको छ spins. भारतीय इतिहास शब्द हरेक अर्थमा richness को घमण्ड गर्ने भारतीय राजाहरूको ठूलो समृद्ध साम्राज्य चिनिएको छ.
Igt अन्तर्राष्ट्रिय गेमिङ प्रौद्योगिकी लागि खडा छ, पछि स्लट खेल को नाम मा आफ्नो नाम धेरै सुन्दर क्रेडिट छ जो एक अमेरिकी कम्पनी 2006. यसको ग्राफिक कलाकार सधैं उच्च-अन्त एनिमेशन र कला प्रविधिको राज्य राम्रो गुणस्तर स्लट सिर्जना मा लक्ष्य जो पेशेवरों को राम्ररी प्रतिबद्ध टोली हो.
जंगली र छरिन्छ सही तपाईंको pockets भित्र विशाल जीत ल्याउन आफ्नो उचित भाग महत्त्व. त्यसैले के प्रतीक को अनुक्रम / संयोजन तपाईं गर्नुपर्छ छवि देखेर हो?
पहिलो कुरा पहिलो, सुनको जंगल स्लट क्यासिनो मुक्त spins कुनै जम्मा आवश्यक खेल छ 50 paylines भन्दा सिर्जना5रील. यो सट्टेबाजी £ 1,500 एक स्पिन 50p देखि सुरु.
को रील jewel पत्थर adorning प्रतीक, तरवार जस्तै कलाकृतिहरु, headpieces, सुन्दर सुनको अलंकृत बक्से, हात्ती मूर्तिहरू, र गोल्डेनगेट. शीर्ष बोनस प्रतीक हो एक2प्रतीक धमिलो बाघ छवि आफ्नो खम्बा गुणा क्षमता छ जो 40 भेट्यो जब5को रील मार्फत.
जबकि सुनको मन्दिर गेट को स्क्याटर प्रतीक छ हात्तीको मूर्ति जङ्गली छ.
यो क्यासिनो मुक्त सुविधाहरू बीचमा कुनै जम्मा आवश्यक खेल spins, समीक्षा जंगली Stays को उल्लेख बिना अपूरो हुनेछ,4नाटकहरु सुविधा. यहाँ, तपाईं सङ्कलन गर्न आवश्यक4तपाईँको स्क्रिनमा लक जंगली रील बनाउन मूर्ति प्रतिमा जंगली प्रतीक. यो बन्द रील अर्को लागि रहन्छ4तपाईं को लागि उत्कृष्ट विजेता संयोजन सिर्जना गर्न spins. त्यसपछि त्यहाँ फ्री Spins बोनस सुविधा भन्दा स्लट क्यासिनो मुक्त spins कुनै जम्मा आवश्यक खेल मा जस्तै स्क्याटर प्रतीक द्वारा रूपबाट जो आउँछ. बीच रही 3-5 छरिन्छ तपाईं निम्न विकल्प चयन बनाउँछ:
त्यसैले, बस जे संयोजन तपाईं सबै भन्दा राम्रो सुहाउने चयन र तपाईं धन को बाटो साथ जान राम्रो हो!
एक कम मध्यम विचरण संग एक स्लट दस दस मा खेलाडीहरू 'विकल्प सबै दायरा लागि उपयुक्त, Igt फेरि कुनै जम्मा आवश्यक स्वर्ण जंगल स्लट क्यासिनो मुक्त spins संग एक हिट गोल छ.